अक्सिजनको मात्रा नाप्ने पल्स अक्सीमीटर किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी विषयहरुमा ध्यान दिनुस् - Technology Khabar
» अक्सिजनको मात्रा नाप्ने पल्स अक्सीमीटर किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी विषयहरुमा ध्यान दिनुस्
अक्सिजनको मात्रा नाप्ने पल्स अक्सीमीटर किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी विषयहरुमा ध्यान दिनुस्
ब्लड अक्सीजन मनिटर डिभाइसलाई पल्स अक्सीमिटर भनेर चिनिन्छ, जुन पछिल्ला दिनमा माग बढिरहेको छ। देशभर कोरोना महामारीले गर्दा पल्स अक्सीमिटर अहिलेको समयमा सबै घरको आवश्यकता भएको छ।
कोरोना संक्रमितहरुले नियमितरुपमा आफ्नो शरिरमा रहेको अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्न यो डिभाइस निकै महत्वपूर्ण भएको छ । कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित बिरामीलाई ब्लग अक्सीमिटर आवश्यक हुन्छ। यसका साथै दम, क्रोनिक अड्रक्ट्रिक पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) वा अन्य फोक्सोको रोग हुने बिरामीहरूले पनि घरमा ब्लड अक्सीमिटर राख्छन्। यस्तो अवस्थामा रगत अक्सीमिटर खरीद गर्दा केहि विशेष चीजहरूको ख्याल गर्नुपर्छ ।
के हो पल्स अक्सिमिटर ?
पल्स अक्सिमिटर एउटा सानो, हल्का उपकरण हो जसलाई शरीरमा भएको अक्सिजनको मात्रा मोनिटर गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो ननभाइसेभ उपकरणले तपाईको औंलामा जोडेर पीडाविना नै जानकारी दिन्छ, यसले औंला मार्फत दुई वेभलेन्थहरू पठाउँदै तपाइँको पल्स रेट मापन गर्न र तपाईँको शारिरिक प्रणालीमा अक्सिजन कति छ भन्ने जानकारी दिन्छ । एक पटक अक्सीमिटरले यसको एसेसमेन्ट गरेपछि यसको स्क्रिनले तपाईंको रगतमा अक्सिजनको कति प्रतिशत छ भनेर डिस्प्लेमा देखाउँछ साथै तपाईंको हालको पल्स रेट पनि बताउँछ । यस लेखले नाडी अक्सिमिटरद्वारा प्रदान गरिएको मापनको महत्त्व र उनीहरूले तपाईंलाई कसरी असर गर्ने कुरा वर्णन गर्दछ।
रगमा भएको अक्सिसजनको अवस्था अर्थात ब्लड अक्सिजनलाई SpO2 मा मापन गरिन्छ भने पल्स रेट अर्थात मुटु धड्किने दर लाई प्रति मिनेट धड्किने दर अर्थात बिट्स पर मिनेट (बिपिएम) मा नापिन्छ ।
बजारमा तीन प्रकारका पल्स अक्सीमीटर पाईन्छन् ।
पल्स अक्सीमिटरले कोरोना बिरामीको शरीरमा शुरुआती चरणमा अक्सिजनको मात्रा नाप्न काम गर्दछ। मुख्यगरि तीन प्रकारको पल्स अक्सीमिटर बजारमा भेटिन्छन् । यसमा फिंगरटिप पल्स अक्सीमिटर, ह्यान्डहेल्ड अक्सिमिटर र फेटल पल्स अक्सीमिटर समावेश छन् ।
सामान्यतया घरमा प्रयोगको लागि फिंगरटिप पल्स अक्सीमिटर किन्नु राम्रो विकल्पको रूपमा प्रमाणित हुन्छ। ह्यान्डहेल्ड अक्सिमिटर र फेटल पल्स अक्सीमिटरहरू मुख्यतया अस्पताल र क्लिनिकल प्रयोगकर्ताहरूको लागि हुन्।
यी चीजहरूको ख्याल गर्नुस्-
फिंगरटिप पल्स अक्सीमिटरको प्रारम्भिक मूल्य करिब १,७००/१,८०० रुपैयाँदेखि शुरु भएर अधिकतम यसको मूल्य ९/१० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने हुन्छ । पल्स अक्सीमिटर किन्दा यस भन्दा बढि भुक्तान नगर्नुहोस्। यसको काम केवल बल्ड अक्सिजन लेभल नाप्ने हो।
प्रयोगकर्ताहरूले सँधै आधिकारिक वेबसाइट वा पसलहरुबाट मात्र पल्स अक्सीमिटर किन्नुपर्दछ।
सुविधाहरूको बारेमा कुरा गर्दा जहिले पनि उज्यालो र स्पष्ट डिस्प्ले भएको र हेर्न सहज हुने किसिमको ब्लड अक्सीमिटर किन्नु पर्छ। अझ राम्रो किन्ने हो भने प्रयोगकर्ताहरूले पानी प्रतिरोधी अर्थात वाटर रेसिस्ट्यान्ट भएको ब्लड अक्सीमिटर किन्नु पर्छ।
सबैजसो पल्स अक्सीमिटरमा रगतमा हुने अक्सिजनको स्तर देखाउँछ । साथै, यदि मुटुको दर पढ्ने अर्थात हर्ट रेट रिडिङ्ग सुविधा उपलब्ध छ भने यो अझ राम्रो हुन्छ ।
पल्स अक्सीमीटरको मुख्य फ्याक्टर भनेको यसको एक्यूरेसीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यद्यपि सटीकता मापनको कुनै साधन छैन। जे होस्, उत्तम तरिका भनेको उत्पादनको समीक्षा र प्रमाणीकरण तथा त्यसले पाएको अन्तरािष्ट्रिय मान्यताहरु लगायत जाँच गर्नु हो।
प्रयोगकर्ताहरूले एफडीए FDA, आरओएचएस RoHS र सीई CE प्रमाणीकरण भएका ब्लड अक्सिमिटर मात्र किन्नु पर्छ।
कोरोनाभाइरसको संकटका बेलामा बेलायतका ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदायकले ‘डाटा क्याप’ हटाए
गूगल डुओले एन्ड्रोइड टिभीमा सपोर्ट गर्ने, अब ठूलो स्क्रिनबाट पनि भिडियो कल गर्न सकिने
नानो स्याटेलाईटको लागि ग्राउण्ड स्टेशन बनाईँदै, प्रक्षेपणको तयारी पुरा
नाइजेरियाली सरकारद्धारा सोसल मिडिया प्लेटफर्म ट्विटरमाथि प्रतिबन्ध
५ हजार एमएएच ब्याट्री क्षमताको मोटोरोला जी२० सार्वजनिक